चार करोडले अपमानित भयौं भन्दै सांसद भावुक भएपछि………. « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
चार करोडले अपमानित भयौं भन्दै सांसद भावुक भएपछि……….
सैघाली खबर, काठमाण्डौँ, १७ जेठ।
अर्थमन्त्रीले सांसदहरुलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा राखेर अपमान गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत प्रतिनिधिसभा बैठकमै भावुक भए । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै जुम्लाका सांसद महत भावुक भएका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ४ करोड छुट्याए पनि योजना छनोटका लागि स्थानीय प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति बनाउनु गलत भएको उनले बताए ।
सांसद तह लगाउने बजेट आएको भन्दै उनले भने, ‘कोही मन्त्री भएँ भन्दैमा हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ भन्या ? हामीलाई तह लगाउन पाइन्छ ? हामीलाई वडाअध्यक्षको ठाउँमा लिएर राख्न पाइन्छ भन्या ? चाहिएको छैन हामीलाई ४ करोड ।’ आफ्नो विरोधले केही नहुने जान्दाजान्दै असन्तुष्टि राख्नुपरेको उल्लेख गर्दे उनले भने ‘बजेटको मैले बचाउ गरिरनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
कमजोर बस्तुको बचाउ गरिन्छ, बलियो बस्तुको सायद बचाउ गरिन्न । सितिमिति सायद यो हल्लिदैन ।’ ‘स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, तपाईहरुको विरोधले मलाई केही हल्लाउदैन । मैले त्यही शब्द सापटी लिएँ । विरोधले खासै हल्लिने देख्दिनँ । तर पनि बजेटले मलाई हल्लाइरहेको छ । हुम्लालाई हल्लाइरहेको छ ।’ बजेट शहर केन्द्रित भएको भन्दै उनले कर्णाली र जुम्लालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘यो बजेट जुम्ला जिल्लाका लागि न हर्ष छ,न विस्मात छ ।’ नेताहरुको ठाउँमा जति बजेट गएको छ, त्यति आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने उनको माग छ । सांसदको नाममा सबै सांसदलाई मुछ्ने काम गरेको भन्दै महतले असन्तुष्टि जनाए । दिनभरी संसदमा बस्दा पनि तपाई त हुनुहुन्न रे भन्दै जनताले फोन गर्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘फलानो सांसद छैनन, एनजीओको कार्यक्रममा छ भन्नुर्पयो । हामी सोझालाई बलीको बोका बनाउने ?’ -onlinekhabar
२३ केजी सुन प्रकरण : सुन बरामद भएको फ्ल्याट अशोक सिन्हाको छोरीको नाममा भएको खुलासा
पुनर्वासबाट अहिलेसम्मकै ठुलो परिमाणको हिरोईन बरामद
आइतबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य घट्यो, चाँदी भने यथावत
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर : कुन देशको कति ? (सुचीसहित)